DEG-DEG: Madaxa Bayern Munich Oo War Buuxa Kasoo Saaray Wararka Sheegaya Inay Iibka Thiago Alcantara Kala Heshiiyeen Liverpool – Laacibnet.net
DEG-DEG: Madaxa Bayern Munich Oo War Buuxa Kasoo Saaray Wararka Sheegaya Inay Iibka Thiago Alcantara Kala Heshiiyeen Liverpool
Madaxa kooxda Bayern Munich ee Karl-Heinz Rummenigge ayaa ka hadlay wararka saacadihii ugu dambeeyay soo baxayay ee sheegaya inay iibka khadka dhexe ee kooxdooda ee Thiago Alcantara kala heshiiyeen dhigooda Premier League ee Liverpool.
Heshiiska Thiago ee Bayern ayaa ahaa mid dhacayay dhammaadka xilli ciyaareedkan cusub iyadoo uu xiddiga ree Spain u sheegay madaxda sarre ee kooxdaas inuu doonayo horyaal cusub inuu u wareego.
Bayern ayaa isku diyaarisay inay iibiso balse ku doonaysay iibkiisa lacag 30 Milyan oo euro ah taas oo ahayd waxa ku adkeeyay inay hesho Liverpool oo ahayd kooxda ugu cad-cadayd saxeexa Thiago.
Saaka ayuu wargeyska The Athletic shaaca ka qaaday in ugu dambayn ay Reds ogolaadeen inay bixiyaan lacagta ay doonaysay Bayern ee 30-ka Milyan ee euro ahayd oo ay labada kooxood heshiiska shaqsiga ah gaadheen.
Thiago ayaa la filayaa inuu qandaraas afar sano ah u saxeexi doono Reds. Shaqsiga ku riixay inay waxkasta deg-deg u dhammeeyaan madaxda suuqa ee Liverpool ayaa ahaa tababare Jurgen Klopp.
Haddaba, si lamid ah wararkii hore, madaxweyne Rummenigge ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa uu ka baxayo Thiago Alcantara oo ay heshiis buuxa la gaadheen Reds.
Rummenigge oo ka hadlayay arrimaha 29 sano jirkaas ayaa yidhi “Bavaria waxa ay heshiis la gaadhay Liverpool, Thiago wuu baxayaa”
Waanu soo dhawaynaynaa
Liverpool horyaalka xgaa haloodhigo sanadkan iyagaa iskaleh reer man city rag iska celis iskadaaya reer chalsiyow axada waxbaa idin sugaya ninkii championka idinka reebay baa laciyaarisaan ee maxaa kaqabtaan arintaan liverpool waxay inila sugaysay waa kan ee waxba kama qabankartaan inshalaah wuu soo dhowyahay